Posted by ညီလင်းသစ် au 7.4.10
ပျောက်နေတာကြာလို့ လာချောင်းတော့မှပို့စ်အသစ်နဲ့ တိုးနေပါရော့လား..။
သစ်ပင်အောက်ကခုံတန်းလေးတွေ တွေ့လိုက်တိုင်းတစ်ခုခု ကိုလွမ်းမိသလိုဘဲ..။
winter ပုံတွေကို ပိုသဘောကျတယ်..။ အခုပုံတွေကနည်းနည်း မှောင်နေသလားလို့..။
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာ လွမ်းမိသွားသလိုပဲ .. :)
Leaves are falling gently, red and green and brown.
When I saw the trees' top, leaves are falling down.
ပုံလေးတွေမြင်ပြီး ငယ်ငယ် YMCA တက်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေး ရွတ်မိသွားတယ်။